ပြဿနာရှိရင်သတင်းရေးတဲ့သူဘဝမှ ပြဿနာရှင်းရမယ့်နေရာရောက်သွားသူ – Voice of Myanmar
ပြဿနာဖြစ်တာတွေကို ပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေသိအောင် တင်ပြရေးသားပေးရတဲ့ သတင်းထောက်တယောက်ဟာ အဲဒီပြဿနာတွေကိုရှင်းပေးရမယ့်တာဝန်ရှိသူ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာရောက်သွားရင် ဘာတွေကွာခြားသွားမလဲ ဘာအခဲတွေရှိလာနိုင်မယ်ထင်ပါသလဲ?
အရင်က ဖားကန့်ကနေ သတင်းတွေရေးသားပေးပို့ခဲ့တဲ့ ကိုအောင်ဟိန်းမင်းဟာ ခုတော့ ဖားကန့်မြို့နယ်ရဲ့ အန်အယ်လ်ဒီပါတီကိုယ်စားပြု ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အရွေးချယ်ခံလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းထောက်ဘဝနဲ့ နိုင်ငံရေးသမားဘဝ ဘာတွေကွာခြားသွားလဲ? သူဖားကန့်ပြည်သူတွေအတွက် ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ? လုပ်ပေးချင်တိုင်း လုပ်ပေးလို့ရော ရပါ့မလား? ဘာစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနိုင်မလဲဆိုတာတွေကို VOM သတင်းထောက် ကိုဇော်မိုးထက်က ဖားကန့်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အသစ်ဖြစ်လာတော့မယ့် ဦးအောင်ဟိန်းမင်းကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။
#voiceofmyanmar #VOM #ဖားကန့်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် #ဦးအောင်ဟိန်းမင်း
ျပႆနာျဖစ္တာေတြကို ျပည္သူနဲ႔သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူေတြသိေအာင္ တင္ျပေရးသားေပးရတဲ့ သတင္းေထာက္တေယာက္ဟာ အဲဒီျပႆနာေတြကိုရွင္းေပးရမယ့္တာဝန္ရွိသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာေရာက္သြားရင္ ဘာေတြကြာျခားသြားမလဲ ဘာအခဲေတြရွိလာႏိုင္မယ္ထင္ပါသလဲ?
အရင္က ဖားကန႔္ကေန သတင္းေတြေရးသားေပးပို႔ခဲ့တဲ့ ကိုေအာင္ဟိန္းမင္းဟာ ခုေတာ့ ဖားကန႔္ၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ အန္အယ္လ္ဒီပါတီကိုယ္စားျပဳ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အေ႐ြးခ်ယ္ခံလိုက္ရၿပီျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းေထာက္ဘဝနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသမားဘဝ ဘာေတြကြာျခားသြားလဲ? သူဖားကန႔္ျပည္သူေတြအတြက္ ဘာလုပ္ေပးႏိုင္မလဲ? လုပ္ေပးခ်င္တိုင္း လုပ္ေပးလို႔ေရာ ရပါ့မလား? ဘာစိန္ေခၚမႈေတြရွိႏိုင္မလဲဆိုတာေတြကို VOM သတင္းေထာက္ ကိုေဇာ္မိုးထက္က ဖားကန႔္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အသစ္ျဖစ္လာေတာ့မယ့္ ဦးေအာင္ဟိန္းမင္းကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားပါတယ္။
#voiceofmyanmar #VOM #ဖားကန႔္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ #ဦးေအာင္ဟိန္းမင္း
Interview, ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမိတ်ဆက်, ဓာတ်ပုံ ဗီဒီယို, အင်တာဗျူး
သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် = ဒီမိုကရေစီ
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းနှင့် VOM တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း နောက်ဆုံးအပိုင်း နစကလက်ထက်မှာ ဖမ်းထားတဲ့သတင်းသမားတွေဘယ်လောက်ရှိနေလဲ၊ သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်နိမ့်နေတာကို ဘယ်လိုရှင်းမလဲ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဘယ်လိုထားသလဲ ၊ ရွေးကောက်ပွဲ တကယ်လုပ်နိုင်မလား
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းနှင့် VOM တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း အပိုင်း(၂) NCA ထိုးပြီးသားအဖွဲ့တွေ ကရော စာချုပ်ပါသဘောတူညီမှုတွေ...
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီလက်ထက်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးက တကယ်ရမှာလား
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းနဲ့ VOM တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း အပိုင်း (၁) မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့...